Laba Nin Oo Shaqadoodii Ku Waayay Kadib Markii Ay Gadhka La Bexeen | #1Araweelo News Network
Laba Nin Oo Shaqadoodii Ku Waayay Kadib Markii Ay Gadhka La Bexeen
Paris (ANN) Laba nin oo Muslim ah, isla markaana ka tirsanaa ilaalada ammaanka madaarka magaalada Paris ee dalka Faransiiska, ayaa sheegay in shaqada lagaga eryey, iyadoo sabab looga dhigay shaqada laga eryay inay Gadhka la bexeen.
Labada Nin, ayaa dacwad sharci ka gudbiyey maamulka madaarka Orly Aiport, iyagoo ku eedeeyey masuuliyiinta in ay safaf geliyeen shaqaalaha Muslimiinta, kadibna ay ku amreen in ay gadhka xiiraan, wixii ka dambeeyey weerarradii Paris ka dhacay bishii hore.
Nin ka mid ah raggan oo lagu magcaabo Bachir ayaa sheegay in qaar ka mid shaqallaaha madaarku aflagaado kula kici jireen, halka saraakiisha sharci fulintuna isku dayi jireen in ay qasab gadhka kaga xiiraan, balse uu diidi jiray, kuna doodi jiray inuu qurux darteed gadhka ula baxay, laakiin aanay ka ahayn diin si uu shaqadiisa u ilaashado.
28 jirkan oo madaarka 5 sannadood ka shaqaynayey waxa uu ku dooday in lagu eryey gadhka oo uu l abaxay darteed, waxaanay garyaqaanno labadan nin metelaya dacwaddooda geeyeen maxkamadda si loogu garnaqo, xaqooda loogu soo celiyo.
Afhayeen u hadlay shirkad Swedish ah oo ammaanka madaarka Paris ka shaqaysa ayaa sheegay in raggani jebiyeen sharciga shirkaddooda u yaal, isagoo xusay in gadhku ka mid ahaa waxyaabaha loo cuskaday erigooda.